Madaxweynaha Jubbaland oo ku dhawaaqay inuu qaadayo dagaal culus – Somali Top News
Madaxweynaha Jubbaland oo ku dhawaaqay inuu qaadayo dagaal culus
December 27, 2018 Somali Top News	0 Comments
Madaxweynaha maamul Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ku labisan dareeska ciidanka ayaa safar shaqo ku tagay deegaanka Cabdalla Biroole oo Saldhiga u ah Ciidanka Darawiishta maamul Goboleedka Jubbaland.
Madaxweynaha oo Safarkan uu ku wehelinayay Taliyaha Guud ee Ciidamada qalabka sida ee Jubbaland janaraal Aadan Maxamuud Ibraahim waxaa uu halkaas kula hadlay Cutubyo katirsan Ciidamada jiida hore ku sugan isagoo sheegay in la qaadi doono howlkii ugu danbeeyay oo Jubbaland ay dhulkeeda ku xoraynayso.
Madaxweynahu wuxuu intaas ku daray in isku furida Magaalooyinka xorta ah iyo xoraynta kuwa aan wali gacanta ku jirin ay isku mar noqon doonto dhamaan Ciidamada kala duwana ay heegan buuxa ku jiraan isagoo hoosta ka xariiqay in ay tahay wax wanaagsan oo lagu faano in ay Ciidamada Soomaalida kaliyah duulaan qaadi karaan oo ay dhulkooda xorayn karaan.
Madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in cabdalla Biroole deeganada ku dhow sida ugu dhakhsiyaha badan loo xorayn doono isla markana dhamaan jidadka la furayo.
← Muqdisho oo loo soo wareejiyay xafiis kale oo ku yaalay Nairobi
Suuqaha Bakaaraha oo lagu dilay labo ruux →
Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug oo eedeyn u jeediyay Puntland
Duqa Muqdisho oo maxkamad ugu hanjabay hogaamiye kooxeed kasta oo dalka soo maray
April 8, 2019 Somali Top News 0
M/weynaha Hirshabelle oo ka hadlay qorshaha ciidamada Burundi ay kaga baxayaan Sh/Dhaxe
February 21, 2019 Somali Top News 0